ဧရာဝတီ| January 5, 2013 | Hits:18,799
62 Responses LeaveaReply Cancel reply
ငိုင် January 5, 2013 - 6:36 pm သူမက နိုင်ငံကို ရှေ့တိုးလိုမူကို အရှိန်မရပ်ချင်လို့ (သို့) စစ်တပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်မူဟာ အာဏာရရှိရေးကိုထိခိုက်မှာ ဆိုးလို့ (သို့) သူမနှင့်ဦးသိန်းစိန် မည်ကဲ့သို့သော Hidden Negotiate လုပ်ထားမူကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့…လို့ဆိုပြန်ရင်လည်း… လက်ပန်းတောင်းတောင်တုန်းက ကျတော့ ချက်ခြင်းရောက်သွားတယ်နော်…ပြောလိုက်တာ အရမ်းအားရပြတ်သားတယ်… ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး ဘာလို့မပြောတာလည်း… စဉ်းစားရကျပ်တယ်… တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဘာအဆင်မပြေထားတာရှိခဲ့လို့လည်း (သို့) တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကကော နင်တိုင်းရင်းသားအရေးဝင် မပါနဲ့လို့ ပြောဖူးခဲ့ကြသလား… တခါတည်းအပြစ်မတင်ဝံ့လို့ လိုက်စဉ်းစားကြည့်တာပါ…
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 9, 2013 - 3:52 am ငိုင် က ရေးခဲ့တယ်။ ‘တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဘာအဆင်မပြေထားတာရှိခဲ့လို့လည်း (သို့) တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကကော နင်တိုင်းရင်းသားအရေးဝင် မပါနဲ့လို့ ပြောဖူးခဲ့ကြသလား…’
Reply ako January 5, 2013 - 7:13 pm i m sure that somethings wrong with Irrawaddy obviously.
Reply Andrew Kham January 5, 2013 - 8:04 pm I believe that Daw Aung San Su Kyi will keeps more silent if she become the president of Myanmar what she calls Burma.
Reply မပြောချင် January 5, 2013 - 9:03 pm အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကို ထောက်ခံပါတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေပါ သနည်း ဟု ထောက်ရှုနေကြသူများ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီဖြစ်သည် ။ ယခင်လို နှုတ်စောင်းမထက်တော့သည်မှာ အသက်အရွယ်ကြောင်းပေဘဲလား ဟုလည်း နားလည်ပေးကြည့်မိသည် ။ သို့သော် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်သမ္မတ လုပ်လိုသည်ဟုပင်ပြောဆိုလာပြန်တော့လည်း ထိုအတွေး မှားမှန်းသိလာရသည် ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တပ်မတော် အပေါ် သြဇာမရှိတော့သည်မှာ သေချာနေသည့်အချိန်တွင် ဒေါ်စုကြည်အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည့်အတွက် တပ်မတော်အပေါ် ဝေဖန်ချက်များ ၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအတွက် သဘောထားမှတ်ချက်များ ၊ လက်ပန်းတောင်းတောင်ကိစ္စတွင် နစ်နာခဲ့သူ ပြည်သူများ ၊ ရဟန်းသံဃာများ အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များကို ယခင်ကဲ့သို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသင့်ပေသည် ။ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလာဒ်တိုင်အောင်စောင့်နေခဲ့မည်ဆိုလျင်တော့ ……
Reply Name January 7, 2013 - 4:26 pm From Ye Yint Nge Blog
Reply pyi soe oo January 5, 2013 - 9:32 pm ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေ နှင့် ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်လာလိမ့်မည် ဟုပြည်သူ လူထု က မျှော်လင့်နေကြပါသည်။ သို့သော် ပြည်သူအများ မျှော် လင့်ထား သလို ရလဒ် မထွက်လာပါက သို့မဟုတ် ပြေလည် နိူင်စရာ ကို မဖြစ်နိူင်မှန်း သိနေ၍ ကြားမဝင် ပဲနေခြင်းလား ဆို တာ စဉ်းစားမရဖြစ်ရပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ၈၈ ကျောင်းသား များတောင် ကြားဝင်ညှိနိူင်းပေး နေသည့် အချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအနေ နှင့်ရော မြန်မာပြည်၏ဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင်တဦးအနေ နှင့်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခုခုတော့ လုပ်ပြ သင့်သည် ဟု ရိုးသားစွာ မြင်ပါသည်။
Reply mg mg nyunt January 21, 2013 - 11:57 pm စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက တင်းမာနေတုန်းပဲဆိုတာနားမလဲဘူးလား စစ်တပ်ကဒေါ်စုဘက် လှည့်လာပြီး ဖမ်းဟယ်ချုပ်ဟယ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စစ်တပ်ကိုမင်းတို့ တာဝန်ယူရဲလို့လား ခုလိုဖြစ်လာအောင် ဒေါ်စုကို အပြစ်မြင်လာအောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုလုံဝသိပါလိမ်မယ် kia kio အခြေမလှမှ ဒေါ်စုကိုလက်ညှိုးမထိုးပါနဲု့kia kio အသာစီးရခဲ့တုန်းက အဲလိုတွေးခဲ့ဘူးလား ဟားးးးးး ဝေးသေးတယ် မင်းတို့ပျော်ခဲ့ကြတယ်မို့လား အဲတုံးက အဲဒီတာ့အာဘော်ဆိုတာလဲ မပေါ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်နော်
Reply pps၁၂၃၄၅ January 5, 2013 - 10:18 pm ပြည်တွင်း မီဒီယာ များ နှင့် ဆန့်ကျင်ကာ တိုင်းရင်းများ ဘက်မှခံစားနားလည်း ပေးခြင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Reply ရွှေဘ January 6, 2013 - 2:50 am နှုပ်ပိတ် လို့ နှုပ်ဆိတ်ခြင်းလား (သို့) နှုပ်ဆိတ် လို့ နှုပ်ပိတ်ထားပါလားလို့ထင်ရတာလား?
Reply dai peng January 6, 2013 - 3:08 am Aung San Suu Kyi is peace himself now. She don’t want to talk about Kachin.
Reply မြန်မာပြည်သား January 7, 2013 - 12:58 pm လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ပြီး စစ်တပ် အရာရှိ တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကတည်း က သူလည်း ရွှေမန်း ဇာတ်ထဲ ရောက်သွားပြီလား မသိ။
Reply MM Citizen January 10, 2013 - 3:57 pm Think about ur self first brother.naw,naw
Reply Salai Lian January 6, 2013 - 3:53 am Silence means acceptance. We were not silent when Suu Kyi was unfairly detained or put under house-arrest. We were 100% with her. She is the daughter of our hero, more importantly, she is smart, intelligent and respected. Her voices have been heard from every corner of the globe. KIO wants to talk and discuss the political issues while Thein Sein offers them only peace talk. Kachins signed peace agreement with SLORC(SPDC) but it did not bear fruit or meet the political demand the KIO has been fighting for for the last six decades. The current government signed peace agreement with various armed groups which we cannot tell how long they will last because there is no guaranty for political solution. In short, we the people including many many Myanmars want to establish Federal Union. We the ethnics do not mind if all divisions become federal states too. We are not asking presidency or Union Government ministerial positions but the system which is Federalism. Centralization is not the way the Union Government might run our country. Centralization is not good for the ethnics, and it is not good either for the Myanmars. If Suu Kyi believes in Federalism and Self-determination in the land of the Union of Burma, she must not keep herself silent but speak out what she believes.
Reply thihamin January 6, 2013 - 3:59 am ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နုတ်ဆိတ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်သလို၊ ခပ်ခွာခွာနေ နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်မလျှိုတာပါဘဲ။
Reply ko saw January 11, 2013 - 1:33 pm ဒါဆိုခေါင်းဆောင် လို့သတ်မှတ်လို့ရပါ့အုံးမလာ? ခွေ့နေတဲ့ကျွဲနှစ်ကောင် နဲ့မပတ်သက်ချင်တောင်မှ မြေစာပင် ဒုကခသယ်တွေအတွက်တော့ပြောသင့်တယ်ထင်တာဘဲ
Reply သူရဇော်ဟိန်း January 6, 2013 - 10:55 am အခု အချိန်မျိုးမှာ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ ဂရုစိုက်ပြုစုရမဲ့ နာနေသူကို ဥပေက္ကာပြု တာနဲ့ တူပါတယ်။
Reply R.zar January 6, 2013 - 11:59 am အုပ်ချုပ်ရေး နယ်ပယ်မှာ အောက်ခြေက နေ သမ္မတအထိ
Reply swe htwe January 6, 2013 - 12:31 pm Although I don’t agree to whatever Daw Su said,I agree to the fact that she don’t want to make the conflict worse. KIO and bengalis are different issue. In Kachin issue,both goverment and KIO are to be blamed. Both sides don’t obey human rights. Both are the same. So,we should not put pressure on Daw Su. Long live Daw Su !!
Reply ဘုန်းဘုန် January 14, 2013 - 4:30 am what both bide ? SPDC is attacking side. KIA resist. Kachin state lostalot.
Reply THIHA TUN January 6, 2013 - 12:47 pm Apart from our own people ,the outside world has noticed her silence over the Rakhine conflict and Kachin war.It is weird to seeaperson who was conferredaprestigious Nobel Peace Prize is shunning from showing her own stand in the time of her own country’s serious situation .It should be questioned, does she want to concentrate only on power sharing with quasi military government ,or doesn’t she want to get involved with minorities’s affairs. She rendered her negligence to calls from EU, OIC, Delai Lama,and UN.As she didn’t make any phenomenal commitment even to her own country’s peace , her prestige asaNobel Laureate may lapse and her image asapeople’s leader will be questioned.
Reply Myo Nyunt January 6, 2013 - 1:14 pm KIO က ပွင့်လင်းလေ ခေါင်းပေါ်တက်လေ ဖြစ်နေတာ
Reply pnwara January 6, 2013 - 2:47 pm ပြောတော့လွယ်တယ်- လုပ်ရတာခက်တယ်- နှုတ်ဆိတ်ချင်လို့ဆိတ်နေတယ်မထင်နဲ့ -သူ့ ခင်မျာ-အားရှာတာ မဟုတ်ဘူး။ အဆိုတော်တွေနဲ့ တွေ့ ရ-လေလံပွဲသွားရ-ဟိုမှာ မိန့် ခွန်းပြောရ-ဒီမှာမိန့် ခွန်းပြောရ- အဲပြီးတော့ စည်းလုံးညီညွတ်ကြပါလို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းပြီး-သူမ ပါတီအဖွဲ့ ဝင်တွေ ကွဲကြ-ပြဲကြတာတွေတောင် ညီညွတ်ရေးလုပ်မပေးနိုင်လောက်အောင်ကို အလုပ်တွေများနေလို့ လှည့်မကြည့်အားဘူး-သိတယ်မဟုတ်လား- ၂၀၁၅ မှာ သမတ ဖြစ်ရင် ဒိထက် အလုပ်ရှူပ်ဦးမှာ-အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာ-
Reply ko saw January 11, 2013 - 1:38 pm ခင်ဗျားကလည်တမျိုး ….
Reply မျိုးချစ် January 6, 2013 - 7:16 pm အမှတ်ပြောရရင်။အောင်ဆန်စုကြည်ကိုလေးမယုံပါဘူး။ကျွန်တော်တိုိုိုင်းရင်းးးသားတွင်အတွက်ဆ
Reply bagan thar January 11, 2013 - 6:12 pm hehe,she not trust u guys too.me too.
Reply Andrew January 6, 2013 - 9:16 pm I believe that Daw Aung San Su Kyi will keeps more silent and careless for minority
Reply George Gotekyar January 8, 2013 - 8:23 pm Yes,You better silent too and continue to hate all bamar.ok?
Reply Nyi January 6, 2013 - 10:22 pm Thats right. I agree with irrawaddy.
Reply little Burmese January 6, 2013 - 11:18 pm Valid point!
Reply crystal vision. January 7, 2013 - 12:43 am All is true,and I have appreciate,his Article,which shows the truth.
Reply kmk January 7, 2013 - 12:46 am On the matter of war between the Army and KIA ;
Reply sunny January 7, 2013 - 9:42 am Morally Daw Suu should speak out Kachin conflict since she wasaleader in democracy rights. Even she is not directly responsible to this but asaMember of Parliment (MP) she have to voice out regarding about this conflict. I am not lecturing Daw Suu but No leader is perfect. Look around other democratic countries, how opposition party behave to the ruling party. Very fuuny to me was that there are no opposition parties in myanmar parliment. It looks like parliment is fake.
Reply Funny January 8, 2013 - 8:30 pm No opposition parties in MM parliment.Yes.But you can opposite to everyone by comment as usual.
Reply oomoe January 7, 2013 - 10:45 am စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်…မြန်မာနိုင်ရှိတိုင်းတိုင်းအားလုံးအပြင် နိုင်ငံအသီးသီးမှလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်
Reply Wan Lee January 8, 2013 - 2:17 pm You r right.People forgot to change them self.Still barking by comment.funny
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 9, 2013 - 4:09 am အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြည်နယ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်ဟာ ဖယ်ဒရယ် ဗဟို အစိုးရရဲ့ အတည်ပြုချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့် ပြည်နယ် ဥပဒေတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေကြတယ်။ ပြည်နယ်တိုင်းမှာ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ နောက်ခံ ပေါင်းစုံ နေကြတယ်။ ယုံကြည်ချက်မှာလဲ အမေရိကန်ကို အရင်းရှင်ဆိုပြီး အမြဲ တိုက်ခိုက်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်တွေ ကွန်မြူနစ်တွေ ရှိတယ်။ တချို့ဆို ရယ်ရတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဆိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဆိုပြီး သူတို့ နေရာမှာ နေပေမယ့် မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကျတော့ သည်မှာ အလယ်လတ်လူတန်းစားထက် သာအောင် အထက်တန်းလွှာ သူဌေးတွေလို ထောက်ပန့် ပို့ထားတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက သည်လို မတူ ကွဲပြားသော နောက်ခံတွေ ရှိကြပေမယ့် oomoe ရေးသလိုပဲ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိပြီး လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး၊ တဘက်လူကို လေးစားမှု အရင်းခံ ဆက်ဆန်နေထိုင်ကြတော့ လက်တွဲ ညီညီ နေနိုင်ကြတယ်။ အမေရိကားမှာ အသက်ပြည့်ပြီး စိတ်ကျမ်းမာရေး ကောင်းရင် လူတိုင်း သေနပ် ၀ယ်နိုင်တယ်။ တလက် ၂လက်တောင် မဟုတ်ဘူး။ စက်သေနပ်တွေ ၀ယ်ကိုင်နိုင်တယ်။ အီတာလျံနဲ့ အိုင်းရစ်တွေ နယ်မြေလုတဲ့ မာဖီယား ဂိုဏ်း စစ်ပွဲတွေ မရှိတော့တာ နှစ်ပေါင်း ရာချီ ချန်ခဲ့ပါပြီ။
Reply ဗမာ January 7, 2013 - 11:10 am ကချင်ကိစ္စမှာ မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ ကချင်တပ်တို့ကြား နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိကြတဲ့ လောဘ၊အတ္တ၊မာန၊ပါဝါ တွေကြောင့် စစ်ပွဲတွေအသက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ကြားထဲက မြန်မာနဲ့ကချင်နှစ်ဘက်စလုံးက စစ်သားတွေအသက်ဆုံး၊ မိန်းမတွေမုဆိုးဖြစ်၊ကလေးတွေ ဖအေမဲ့ဖြစ်ကြရတာပဲအဖတ်တင်ပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကပဲကျကျ၊ကချင်ဘက်ကပဲကျကျ တိုင်းပြည်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုချည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နှစ်ဖက်စလုံးကကုန်ကျခဲ့တဲ့စစ်စရိတ်တွေဟာလည်း ကတယ်တမ်းကြည့်ရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေဆုံးရှုံးတာပါပဲ။
Reply saung January 8, 2013 - 2:45 pm thank bamar .i agree 100% your comment.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 9, 2013 - 4:20 am ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဗမာ။ ပြောထား ရေးထားသမျှ အကုန်မှန်ပါတယ်။ အန်တီစု သမတ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာက သူသာ သမတ ဖြစ်ခဲ့ရင် ရခိုင်နယ်မြေမှာ ရခိုင်တွေပဲ ဦးစားပေး ပေးနေပြီး ကျန်သူတွေက လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေနဲ့ အညီ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ပြည့်စုံရင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာလဲ စစ်ပွဲတွေ ရပ်ပြီး သူမကို သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆိုခဲ့တဲ့ ကချင်လူထု အေးချမ်းစွာ နေခွင့် ရမယ်၊ ရဟန်းသံဃာတွေလဲ မျက်ရည်ယိုဗုံးကြောင့် မျက်ရည်မကျပဲ မီးလောင်မခံရဘူး။ ဒါတွေ ဖြစ်အောင် သူမ သမတ ဖြစ်ချင်တာပါ။ ကြည့်နေပါ။ သူမ သမတ သက်တမ်း ၄ နှစ်မှာ စိတ်ချရအောင် လုပ်ပြီးရင် သူ့ကို ထပ်ရွေးတောင် သူမ သမတ ထပ်လုပ်မယ် မထင်ပါ။ လူငယ်တွေထဲက စိတ်ချရသူကို လက်လွှဲ တင်ပေးခဲ့မှာပါ။ ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်အဖွားနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာကြပါ။ စိတ်ပုတီးကိုင် တရားထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀အတွက် မလုပ်ပဲ အများအတွက် လုပ်ပေးနေသူပါ။
Reply AH THAW KA January 13, 2013 - 11:27 pm THE TIME WILL MAKE THE TRUE DECISION.
Reply Aye May 3, 2013 - 11:52 am Very good
Reply Stone Cold January 7, 2013 - 11:57 am Our Lady has too much gray hair in recent days. Maybe, she is working from inside so hard. Sooner or later we will see her effort. We all need to wait and see patiently. I do not believe she is with the terrorists. I still do believe that she is shedding her tear for the victims of this inhumane assault. But, Than Shwe maybe behind this assault which Thein Sein and Daw Suu have no power to contain the fire. Min Aung Hlaing’s power is beyond president’s power according to 2008 Nargis constitution.
Reply Chin Lay January 7, 2013 - 12:30 pm I agree with Sunny. We know she ( Daw Su ) can do nothing much. But she should speak out at least one time as Nobel laureate. We support her and voted her party.We enjoyed when she received Nobel peace Prize. Other Nobel pease prize winners speak out when she was in house arrest.
Reply ပါကြီးဖိုး January 8, 2013 - 3:02 am အဆမတန်ပြင်းထန်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ (အသတ်ကိုတောင် လုပ်ကြံဖို့အထိ) ဖိနှိပ်မှုလောကဓံကို ခံခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်တော့ အခုလို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် သူမရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ သန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့ စေတနာနဲ့ သူမသွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်ကို ဝေဝါးသွေဖီစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရာထူးမက်သူ ဆုတံဆိပ်မက်မောသူလို့ ထင်မြင်ရင်တော့ ဒါဟာ စဉ်းစားဥာဏ်မရင့်ကျက်မှုကို ပြရာရောက်ပါတယ်။
Reply လူလေး January 8, 2013 - 9:15 am ဒေါ်စုကို မဝေဖန်နဲ့ မိုးကြိုးပစ်တတ်တယ်။ ဟိုတနေ့က ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ခင်ညွန့်တို့ လက်ထက်ကပေါ့ အစိုးရဝေဖန်ရင် ထောင်နန်းစံပြီဆရာပဲတဲ့။ NLD အာဏာရလာ ရင်လဲ NLD နဲ့ ဒေါ်စုကိုဝေဖန်ရင် ထောင်ထက်ဆိုးတဲ့ ရစရာမရှိအောင် ဝိုင်းဆဲ ခံရမှာ။ သူဘာလုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် မဝေဖန်ရဲလောက်အောင်ပါပဲ။ ခု ကချင် ကိစ္စမှာလဲ စစ်တပ်ပဲ လွန်လွန် KIA ပဲ လွန်လွန် အပစ်ရပ်ဖို့တော့ လိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်တွေက သေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ခြေစစ်သားနဲ့ အပြစ်မဲ့ ကချင်တွေပဲသေမှာဒုက္ခရောက်မှာ။ ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဆင်တွေ ကျားတွေ ဖမ်းမယ်ပြောပြီး ခုတော့………၂၄နှစ်လုံးလုံး ဝိုင်းထောက်ခံလာတာ ခုတော့ အန်ဂျီအိုတွေ လုပ်ရမယ့် ရန်ပုံငွေရှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာပဲ အချိန်တွေ ကုန်နေကြပါလားဗျား။ အဲဒါက အစိုးရနဲ့ အန်ဂျီအိုအလုပ်ပါ။ အစိုးလုပ်လာအောင် တိုက်တွန်းရမှာ။ အင်းအားကြီး အတိုက်ခံ ပါတီက ပရဟိတ လုပ်ဖို့ပဲလာဗျာ။ အရင်က စစ်အစိုးရကို ဖော်လန်းဖား အနုပညာသမားတွေလဲ ခုတော့ တော်လှန်ရေးသမားတွေ ဖြစ်လို့ပေါ့။တိုင်းရင်းသားတွေ အသံနားထောင်ကြည့်တာ ဘယ်ဗမာ ခေါင်းဆောင်မှ မယုံတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ရတော့မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပါပြီး။ အစထဲက ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှ ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ရင် ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင် မလိုခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ခုတော့…………ရခိုင်အရေး၊ ကချင်အရေးမှာ ကြတော့ နှုတ်ဆိပ်နေပြီး လက်ပံတောင်းမှာကြတော့ မှ ထလုပ်တာလဲ ကျနော့် ပါစွန်နယ်အရ ဘဝင်မကျပါ။ ကေအိုင်အေ မှားတယ်ပဲ ထားဦး စစ်ပွဲရပ်အောင်တော့ လူထုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ပြောရင် ကျနော်တို့ ပါစပ်ပေါင်းများစွာ ပြောတာထက် ပိုလေးနက်မှာတော့အမှန်ပါ။ခုတော……ကျနော့် ကွန်မန်းတော့ မဖျက်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
Reply Sai Linyone January 9, 2013 - 8:50 am Its true. We the ethnics and the Burmese are suffering under this regime. It is not about Burmese or Kachins butafwe bad apples who enjoy power for too long and for them it is difficult to lose it. Older generals will fade away(They want it or not). And new generations will adapt modern ideology. Suu Kyi also will go down in history as she isahuman being. We will still be okay without her. Because she is not God.
Reply saung January 8, 2013 - 2:40 pm Editor Editor I always trust her.She never betray to people of Myanmar .She has given her life to Burma and she put her life in danger .Do you people think she is doing for to become president .I am so sorry to read some comments .Sometime I wonder she is not worth for our own selfish, narrow minded, uneducated and always first in their self interest people .Yes she is silence if she necessary .She is playing with tigers who still want military government .She is always in danger don’t you people know that. The war has created by both of power mad people .If they want people first they need to find the way to make peace .Why she get blame which she is not creator also she has no power . Kachin and Military both they really want peace, they both leave their selfishness .That is answer .
Reply ohnmar January 8, 2013 - 3:17 pm ဒေါ်စုဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုအနည်းငယ်နားလည်နိုင်ပါသည်။ လက်ပန်းတောင်းကိစ္စ
Reply ko saw January 11, 2013 - 1:45 pm ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရင်ထဲမှာ ယားကျိယားကျိဖြစ်နေတာတော့အမှန်ဘဲ
Reply Nann honey January 8, 2013 - 10:21 pm Ummmmm!!! ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်တင်လို ခြင်း မဟုတ်ပါ။ သူမက ဒီ ကိစ္စကို ဘယ်လို ကယ်တင်ရမလဲ ဆို ပြီး အချိန်
Reply mm January 10, 2013 - 3:36 am After reading most comments I now understand why our country is like this. Most people are stupid. What the hack do you people want her to say? Someone tell me if u know what she should say.
Reply Mann January 17, 2013 - 1:13 pm ၀ိုင်းအာကြတာတော့ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ကြလေကုန်၏။ ဘာကို၊ဘယ်လို၊ဘယ်အချိန် မှာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျုပ်လည်း မသိလို့ ဘာမှပြောတော့ဘာဘူးဗျာ။
Reply naing January 11, 2013 - 7:18 am People here are talking like as if this is the very simple and straight forward thing regarding the issue. Not like two men fighting in the street and someone standing there should interrupt just to stop the fight. It’s not that simple people. Please look at the bigger picture and these sort of things take time, oftenalong time. Not like if she say ” I protest the fighting, pls stop!” then both parties stop fighting immediately. Not that simple!!
Reply emerald January 14, 2013 - 7:45 pm နေရာတကာဒေါ်စုကြည်ပါမှပြီးမှာလား။ဒေါ်စုအခုနေသေသွားပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်ဒေါ်စုပေါ်လာသည်အထိစောင့်ဦးမလား။အခုအသေသေးတာလို့ ပြောလို့ ရတယ်။သေသွားပြီလို့ သဘောထားလုပ်လိုက်တော့မြန်မြန်ခရီးမရောက်ဘူးလား။နှစ်ဦးနဲ့ ပြေလညအောင်လုပ်လို့ ရတယ်ကိစကို သုံးဦးမလိုပါဘူး။ဒီကိစကအစကတည်းက ဘာကမ်းလှမ်းမှုမျိုးမှမရှိဘဲစကတည်းကလက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းရင်တစ်မျိုး။အခုက အပစ်ပြန်ရပ်ဖို့ ပြောတယ်။ကေအိုင်အေက နိုင်ငံရေးမှဆွေးနွေးမယ်ပြောတယ်။အစိုးရကအရင်ကတည်းကနောက်လာမယ့်အစိုးရနဲ့ မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောပြီးသား။အခုလည်းမဆွေးနွေးဘူးလို့ မပြောဘူး။အပစ်ရပ်လိုက်ရင် ဒီလိုညိစရာမရှိဘူးဆိုတာ အခုနောက်ဆက်တွဲတွေကသက်သေဘဲ။သဘောတူညီချက်အရတပ်နေရာချပြီးတိုက်တဲ့သူက မှားမှာဘဲ။အပစ်မရပ်ဘူး။ဟိုကတပ်တစ်တပ်ကျွံ့ နေတယ်။ရိကာပို့ ဖို့့အကြောင်းပြတယ်။တကယ်တိုက်စစ်မဆင်ဘဲခုခံစစ်မှာဒီလိုရိကာပို့ ရင်းငြိကောင်းငြိနိုင်တယ်။အဲဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီတော့အဖြေကရှင်းအောင်အပစ်ရပ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေါ်နွေးမယ်ဆို ပြသနာရှင်းသွားမယ်။မဆွေးနွေးဘူးလား။ပြန်တိုက်မယ်။ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုမတွေးဘူး။ကေအိုင်အေဘက်ကသာနေတုံးကတော့ ကေအိုင်အေကော။အတိုက်အခံကော၊မီဒီယာကော ဘာသံမှမထွက်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကနိမ့်ပြီဆိုတော့ ဘယ်သူကယ်ပါ။အသံထွက်ပါဖြစ်လာရော။
Reply suan January 18, 2013 - 2:21 pm အမှန်တကယ်လဲ အမေစု နှုတ်ဆိတ်မနေသင့်တော့ပါဘူး။
Reply ရော ဘတမ February 18, 2013 - 5:00 pm ပွင်း ပွင်း လင်း လင်း ပြား မယ် အမေစု အာဏါရှုး မဟုတ်ပါ
Reply ကိုလေး February 18, 2013 - 5:03 pm ဧရာဝတီ အရမ်လေးစားတယ်
Reply တင်ဝင်း February 18, 2013 - 5:13 pm အပေါ်မှာမိ?က်ရေးထားတယ် အမေစုအာဏါရရင်
Reply ရာဟု February 18, 2013 - 5:21 pm စစ်အစိုရသည် အင်းဂလိပ်တွေနဲ့ အတူတူပါပဲး
Reply mr TM April 4, 2013 - 6:32 pm နိုင်ငံရေးရဲ့လှဲ့ကွက်တွေကိုနားမလယ်တော့ဒေါ်စုကိုအပြစ်မြင်ကြတာကိုမှားတယ်လို့မဆိုခြင်ပါ ဘူး၊တိုင်းပြည်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲချင်နေတဲ့စစ်တပ်လူကြီးတွေရဲ့လှဲ့ကွက်ထဲကိုဒေါ်စုဝင်သွားရင်ဒီ ထက်ဆိုးတဲ့အခြေနေကိုမရောက်စေချင်လို့ဒေါ်စုနှိပ်ပိတ်နေတာလို့ဘဲထင်ပါတယ်၊မွစ္စလင်တွေ အများကြီးအသတ်ခံခဲ့ရတာကိုဝမ်းမနည်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုစတေးခဲ့ကြရတာပါသူတို့ကိုဘုရားသခင် နိဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
Reply mr TM April 4, 2013 - 8:26 pm နိုင်ငံရေးလှဲ့ကွက်ထဲဒေါ်စုဝင်လာအောင်နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုနဲ့အခွင့်ထူးခံနိုင်ငံ ရေးသမားတချို့ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့လှဲ့ကွက်ထဲဒေါ်စုဝင်သွားရင်နိုင်ငံပျက်ဆီးသွားမှာပေါ့၊ဒီစီစဉ်မှု့ ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံတော်အတွက်စတေးခံရသူတွေဘဲသူတို့အတွက် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းစု တောင်းပေးဘို့ကကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့တာဝန်ပါဘဲ